Uyini umehluko phakathi kwe-Tween 80 ne-Tween 20?
Ake sifunde nge-Tween 80 (eyaziwa nangokuthi i-Tween 80 noma i-polysorbate 80) ne-Tween 20 (eyaziwa nangokuthi i-Tween 20) ngezindlela ezintathu ezihlukene. Ukuhlanganiswa kwe-Tween 20: ingxube ye-polyethyl ...
Isikhathi eside, imboni yomkhiqizo iqaphela kakhulu ngokusetshenziswa kwe-ejenti engaphakathi yokukhishwa kwe-silicone. Lokhu kungahle kuhlangane kakhulu nokuqonda okuhlukile nokusetshenziswa komkhiqizo.Kunokungaqondani okuningi mayelana nomenzeli wokukhishwa ku-silica gel One. Ngomthelela we-pri ...
Ngo-2025, inani lemakethe yomhlaba we-carbomer kulindeleke ukuthi lenyuke liye kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.34
Amandla emakethe weQingdao carbomer makhulu. Kutholakala ukuthi eminyakeni emihlanu ezayo, kuzoba nemakethe ye-yuan eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.34 ezothuthukiswa ngo-2025.
Iyini imiphumela yemilingo ye-carbomer?
IKapom ikuyo yonke indawo empilweni yethu yansuku zonke, ngabe uyibonile? Namuhla sizofunda ngokusetshenziswa kwale kapom emangalisayo noMongameli Hu kusuka ku-Inoxon New Materials. 1. Vikela isikhumba sakho i-Kapok inomphumela obonakalayo wokuvikela esikhunjeni somzimba womuntu, sinokuhlangana okuthile kwesikhumba somzimba womuntu, ufuzo ...
Isifinyezo sochungechunge lwe-PEG, uyafuna ukwazi?
I-Peg-200: Ingasetshenziswa njengendawo yokuhlanganiswa kwezinto eziphilayo kanye nesithwali sokushisa esinezidingo eziphakeme. Ingasetshenziswa njenge-humectant, i-solvent engeza usawoti wezinto ezingaphili kanye nomlawuli we-viscosity embonini yamakhemikhali yansuku zonke. Isetshenziswe njenge-softener kanye ne-antistatic agent embonini yendwangu; Isetshenziswe njenge-wet wet ...
Qonda izinzuzo zokusebenza kwe-polyethylene glycol, ngokukhiqizwa kwesisekelo esihle!
I-Polyethylene glycol (i-PEG) iyi-polymer ye-ethylene oxide namanzi. Yiparafini emhlophe noma uphawuda omhlophe oqinile, ongenaphunga noma onephunga elibuthakathaka. Ayinabuthi, ayicasuli, inomswakama omuhle wamanzi, futhi inokuhambisana okuhle nezinto eziningi eziphilayo. Zisetshenziswa kabanzi kwezimonyo ...